दूरदर्शी नेताहरु नै भएनन् « News of Nepal
दूरदर्शी नेताहरु नै भएनन्
नेपाली नागरिकका लागि दुःखद कुरा हाम्रो मुलुकमा दूरदर्शी र दीर्घकालीन सोच भएका नेताहरू कोही पनि छैनन् । राजनीतिक दलहरुका नेताहरूको स्वार्थ कहाँ को–कोसँग जोडिएको हुन्छ । यसकारण मुलुकमा एकपछि अर्को नागरिकको ध्यान मोड्न र झुक्याउन समय–समयमा नयाँ–नयाँ कुरा आइरहेको हुन्छ ।
राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन छिमेकी नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङको पुत्ला दहन अनि भारतीय र चिनियाँ राजदूतावासअगाडि प्रदर्शन गरेर कुनै काम छैन । दोषी र जिम्मेवार हाम्रो मुलुकका नेताहरू हुन् । प्रमाणहरु मेटाउने काम पनि भएको हुन सक्छ ? यसकारण वास्तविक नक्सा र प्रमाण जुटाउने काम गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारमा दम्भ, आँट र हिम्मत भए नापी विभागबाट सिमाना नापजाँच गर्ने काम गरौं ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न नापी शाखा वा नापी विभागमा पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण नेपालको सिमाना यहाँसम्म नै हो भन्ने कसैलाई थाहा छ ? यकिन छ ? प्रमाण छ ? किल्ला–खम्बा छ ? थाहा छैन भने अन्दाजीको भरमा हावादारी कुरा कसैले पनि नगरौं ?
सरकार केका लागि हो ? परराष्ट्र मन्त्रालय केका लागि हो ? सीमाबारे समस्या समाधान गर्ने काम सरकारको हा । नयाँ नक्सा जारी गरेर मात्र हुँदैन । यहाँ दूरदर्शी नेताहरु नै भएनन् । त्यसैले दूरदर्शी नेताको खाँचो छ ।
– राकेशकुमार शर्मा
हेटौंडा उमनपा–२, मकवानपुर ।
म्याग्दीलाई धार्मिक स्थलको रुपमा चिनाऔं
हिन्दूहरूको पवित्र धार्मिक ग्रन्थ श्रीमद्भागवत महापुराणमा उल्लेख गरिएका विश्वका १५ वटा पवित्र तीर्थस्थलमध्येको एउटा तीर्थस्थल म्याग्दी जिल्लामा छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ मा रहेको पुलस्त्य पुलहाश्रमलाई विश्वकै पवित्र तीर्थस्थलको रुपमा श्रीमद्भागवत महापुराणमा उल्लेख गरिए पनि सो तीर्थस्थल प्रचारप्रसार, भौतिक पूर्वाधार र संरक्षणको अभावमा ओझेलमा परेको छ ।
श्रीमद्भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्दको अध्याय चौधको दण्डकका अनुसार पुलस्त्य पुलहाश्रम क्षेत्र विश्वका अति पवित्र १५ वटा तीर्थस्थलमध्ये एक मानिन्छ । श्रीमद्भागवत महापुराणमा कुरू क्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलस्त्य पुलहाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गुतीर्थ, रामेश्वरम्, प्रभास, कुशस्थली, वाराणसी, मधुपुरी, पम्पासरोवर, नारायणाश्रम, विन्दु सरोवर र सीताराम आश्रमलाई विश्वकै १५ अति पवित्र तीर्थस्थलको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
पुराणप्रसिद्ध तीन ऋषि पुलह, पुलस्त्य र विश्रवा म्याग्दी पुलाको पछैमा अध्ययन र चिन्तनमनन गर्दै बसेको पुराणमा उल्लेख छ । पुराणका अनुसार विश्रवा ऋषिको छोरा रावणको जन्म यही पुलस्त्य आश्रममा नै भएको थियो । रावण जन्मेर हुर्के–बढेको ठाउँ पनि पुलस्त्य आश्रम नै भएको पुराणमा उल्लेख गरिएको छ । पछि रावणले मुस्ताङ थाकखोलाकी थकालीकी छोरी ‘मन्दोदरी’लाई विवाह गरी कालान्तरमा लंकाको राजा भएको पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।
श्रीमद्भागवतजस्तो विश्वप्रसिद्ध पुराणमा उल्लेख गरिएको यस्तो विश्वकै अति पवित्र तीर्थस्थलमध्येको एक तीर्थस्थल म्याग्दीमा रहनु म्याग्दीका लागि मात्रै नभएर नेपालकै सौभाग्य हो । यसको समुचितरुपमा विकास गर्ने हो भने प्रशस्तै आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ । पुलहाश्रमलाई ऋषिआश्रमका रूपमा विकास गर्ने, रावणको नाभी गाडेको भनिएको ठाउँमा ‘रावण कुटी’ बनाउने, रावण खेलेको भनिएको ‘राउन्नेको पाटो’लाई रावण पार्कमा रूपान्तरण गर्ने, बेनी–पछै केबुलकार बनाउने, पुलस्त्य पुलहाश्रम क्षेत्र (साबिकका पुला, घतान, अर्थुङे, पात्लेखेत, झीं, पाखापानी, सिंगा, कुहुं, ज्यामरूककोट, भकिम्ली, मल्लाज आदि) लाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी भारत, नेपाल र श्रीलंकामा प्रचारप्रसार गर्ने हो भने पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना यहाँ छ ।
त्यसै गरी, जिगन्नाथ, टोड्के, कपिलाश्रम, मालिका, गलेश्वर, रिखार, तातोपानीसमेतलाई एकीकृतरूपमा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी प्रचारप्रसार र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने हो भने म्याग्दीको सेरोफेरो आकर्षक धार्मिक पर्यटकीय स्थल बन्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
– आक्पा लामा, म्याग्दी ।
खन्जना गीत–नाच लोपोन्मुख अवस्थामा
गुल्मीमा खन्जना गीत तथा नाच उचित संरक्षणको अभावमा लोपोन्मुख अवस्थामा छ । मालिका गाउँपालिका–१, नेटामा प्रचलित खन्जना गीत तथा नाचको उचित संरक्षण हुन नसक्दा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको हो । तीजका अवसरमा खन्जना मात्र गाउने र नाच्ने तर अघि–पछि खन्जनाको खासै वास्ता नहुने गरेको छ । युवापुस्तामा सिको नहुँदा र यसको व्यापक प्रचारप्रसार नहँुदा तथा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खन्जना दिन–प्रतिदिन लोप भई ओझेलमा पर्न थालेको छ ।
मगर समुदायमा केन्द्रित खन्जना पुराना पुर्खाले गाउँदै आएको हो । भगवान् तथा देवीदेवताका गीत महिला र पुरुषले सामूहिकरुपमा खन्जना गाउने र नाच्ने गरिन्छ । पछिल्लो समयमा युवापुस्ता पुरानो मौलिक संस्कृतिभन्दा पनि आधुनिकतातर्फ बढी आकर्षित हुन थालेपछि पुरानो मौलिक संस्कृति खन्जना ओझेलमा पर्न थालेको छ । यो दुःखको कुरा हो । यसलाई बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो ।
जिल्लाकै एकमात्र ठाउँ नेटामा खन्जना रहेकाले जिल्लाको अन्यत्र कहीँ–कतै पनि खन्जना नभएकाले पनि यसलाई बचाउन जरुरी छ । सबै युवापुस्तालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, सबै मिलेर संस्कृति बचाऔं ।
– सुब्बा राना, गुल्मी ।
हरेक दिन मुस्कुराउनुहोस्, खुशी हुनुहोस्
लकडाउनबारे जनसमुदाय अलमलमा
अदालतमा मुद्दा रोक्न युएस बंगलाको रिट
सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा..
खोकनावासी र प्रहरीबीच झडप हुँदा ४..
सलहबाट मकै बालीमा पाँच करोडको क्षति
‘यार्सा संकलन गर्न पाइएन, खान लाउनै..
परपुरुषसँग लसपस गर्न लकडाउन तोडियो
बझाङमा पहिरोले १७ घर बगायो, ७ जना बेपत्ता
भोलिदेखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गरिने
गृहमन्त्रीले साथ छोडेपछि प्रधानमन्त्री झन् अप्ठेरोमा
प्रदेश ५ मा शनिबार विभिन्न घटनामा ९ जनाको मृत्यु
झण्डा हटाएको भन्दै गोली प्रहार
नगरवासीलाई स्वस्थ्य राख्न तिलोत्तमाले खुला व्यायामशाला निर्माण गदैं
सखुवानन्कारट्टी गाउँपालिकामा करोडौंको लगानीमा पुल निर्माण
थप २७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,कूल संक्रमितको संख्या १५ हजार ४ सय ९१ पुग्यो